Cagta OM - OM: 42ME loogu talagalay Morgan Sanson, ma jirto raaxo la'aan - FOOT 01 - TELES RELAY
ACCUEIL » SPORTS Cagta OM - OM: 42ME loogu talagalay Morgan Sanson, ma jirto raaxo la'aan - FOOT 01
Cagta OM - OM: 42ME loogu talagalay Morgan Sanson, ma jirto raaxo la'aan - FOOT 01
la daabacay Khamiis 11 April 2019 11: 00 In: OM, Mercato, Premier League.
Toddobaadkan, war saxaafadeed oo Faransiis ah ayaa si aad ah u dhaleeceeyay kooxda Wolverhampton ayaa diyaar u ah inay u isticmaasho 42ME si ay u qorto Morgan Sanson, khadka dhexe ee Olympique de Marseille, kaasoo aad ugu riyaaqaya shaqaalahan haatan ee 8e Premier League. Laakiin Khamiistii, La Provence, saaxiib dhow oo ka tirsan Morgan Sanson ayaa rikoodhada tooska ah u dejiya iyadoo caddaynaysa in marnaba soo jeedinta Wolverhampton ay soo gaartay miiska hogaamiyeyaasha OM, wax ka badan oo la xidhiidha kula ciyaara.
Dhanka kale, Morgan Sanson had iyo jeer waa hal ciyaaryahan oo dhalisay danta ugu badan ee kooxda Marseille, haddii kooxda OM ah ayaa lagu qasbay in la sameeyo iibka isreebreebka aan koobka Yurub. Laakiin ahmiyadda koowaad ah, ee sano ee ciyaaryahanka khadka dhexe 24 ma ay heli doonaan xilli ciyaareedka soo socda farxadaha nolosha ee West Midlands, ay u badan tahay kooxaha sexiest ilaalo ugu jirnaa ee suurto gal Rabti haddii hawlgal noocan oo kale ah lagu samayn karaa soo socda xagaagan suuqa kala iibsiga ciyaartoyda.
"Sanamkaygu wuxuu ahaa Johan Cruyff" - Guy Stefan ayaa ku jirta wareysiga Fast Foot - VIDEO
Mouelle Kombi: "Cameroon waa inay ka fiicnaadaan Canada tan 2015"